आमा जानुहोस् | मझेरी डट कम
editor — Sat, 10/22/2016 - 22:10
मनले नचाहँदा-नचाहँदै पनि म आमातिर हेरेर भन्दछु, ‘आमा, जानुहोस्, कोठामा गएर सुत्नुहोस्।’
मेरो कुरो टुंगिनासाथ मानवी कुरो थप्दै भन्छिन्, ‘हो त नि! यहाँ यी भुराभुरीसँग बसेर के गर्नु ? बरु कोठामा गएर आरामसँग सुत्नुहोस्।’
भन्न त मेरा मित्रहरू भन्ने गर्दछन्, ‘गोकुलजी ! तपाईं बडो भाग्यमानी हुनुहुँदो रहेछ वृद्धा भइसकेकी अशक्त आमाको सेवा गरेर बस्नुभएको छ। के गर्नु हामीले चाहेर पनि आफ्ना मातापिताप्रति आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न सकिरहेका छैनौँ।’
आफ्नो प्रशंसा सुन्दा कसलाई राम्रो नलाग्ला र ? तर, आमालाई आफूसँग राख्दा व्यहोर्नुपरेको भोगाइको मर्मलाई मैले मात्र होइन, मेरो परिवारले समेत कसरी खेप्नुपरेको छ, त्यो मैले मात्र अनुभूत गर्न सकेको छु।
भरभराउँदो बैँसको बेला अचानक वैधव्यको मार सहन बाध्य भएकी मेरी आमाले कसरी आफ्ना इच्छा-आकांक्षालाई वशमा पारेर जीवनभरि संघर्ष गर्नुभयो होला! ती कुरा सोच्दासोच्दै म भित्रभित्रै भुटभुटिन्छु, आहत हुन्छु।
जुन आमाले दश नंग्रा खियाएर अर्काको कुटो-कोदालो गरेर मलाई हुर्काउनुभयो, जुन आमाले आफ्नै जेठाजु-देवरबाट अनेकौं लाञ्छना, अवहेलना सहेर आफ्नो लक्ष्यप्राप्तिका निम्ति अडिग भई मलाई शिक्षाको बाटोतिर अग्रसर हुने वातावरण सिर्जना गर्नुभयो, आज उनै संघर्षशील मेरी आमा अर्धपक्षघातको सिकार भएर मबाट समेत टाढिनुपरेकोमा लज्जाबोधले म भित्रभित्रै गलिसकेको छु। तर, पनि मेरी आमा मेरो परिवारमा अटाउन सक्नुभएको छैन। यो कुरालाई म सहर्ष स्वीकार्न बाध्य भएको छु। करिब १४ महिनाअघिको कुरो हो। बिहान ओछ्यानबाट उठ्नेबित्तिकै आमा ढल्नुभएको थियो। उहाँ ढलेको आवाज सुनेर मानवी दगुर्दै आमा सुत्ने कोठामा पुगेकी थिइन्। मानवी सँगसँगै म पनि हत्तपत्त आमाको कोठामा पुगेको थिएँ।
‘आमालाई के भएको होला, उठ्नै सक्नुहुन्न,’ मानवीले आमाको पाखुरा समातेर उठाउने उपक्रम गर्दै भनेकी थिइन्। ‘के भो आमा? के भो आमा?’ भन्दै म पनि अत्तालिँदै आमालाई उठाउन पुगेको थिएँ। तर, मेरो प्रयास पनि निरर्थक भएको थियो। त्यसपछि आमालाई तुरुन्तै अस्पताल लगेर जँचाइयो। अस्पतालका डाक्टरले आमालाई जाँचेपछि उहाँ पक्षाघातको सिकार भएको ठहर गरे।
मानवी र म भएर आमाका फोहोर लत्ताकपडा सफा गर्थ्यौं। घर सफा गर्थ्यौं। तर, पनि घर उस्ताको उस्तै फोहोरी र गन्हाउने हुन्थ्यो। आमालाई नुहाइदिने र कपडा धुने क्रममा कैयौँपटक हामीले बान्तासमेत गरेका थियौँ। तर, पछि-पछि बानी परेर होला, जति नै घिन लागे पनि बान्ताचाहिँ हुन छाड्यो। मेरा छोराछोरीको हाल पनि बेहाल भएको थियो। उनीहरूले त राम्ररी खान पनि छाडिसकेका थिए।
‘यस्तै हो भने त यिनीहरूको पढाइलेखाइ पनि खत्तम हुने भयो। मेरो त बिदा पनि सिद्धियो। अब उही बेतलबी बिदामा बस्नुपर्छ। पैसाले कसरी पुर्‍याउने हो ? घर कसरी धान्ने?’ मानवी बिरक्तिएर भन्ने गर्दथिन्। सत्य भन्ने हो भने म मेरी आमाको अवस्थाले गर्दा हरबखत मानसिक तनाव झेलिरहेको थिएँ। तर, विवश थिएँ, म केही गर्न सक्दैनथेँ।
कहिलेकाहीँ त म आमालाई बेस्सरी झपार्ने पनि गर्न थालेको थिएँ। तर, बीचरी मेरी आमा ! मैले उहाँलाई हकार्दा उहाँ सानी बच्चीझैं निधार खुम्च्याएर आँखाबाट आँसु छचल्काउँदै विवश दृष्टिले मतिर हेर्नुहुन्थ्यो। त्यो निर्दोष घात सहन नसकेर मेरा आँखाबाट स्वतः आँशुका धारा बग्दथे।
पछि-पछि भने हामीले आमालाई उहाँको कोठाबाट निस्केर अन्य कोठातिर आउनजानलाई प्रायः निषेध गरिदिएकोझैं भएको थियो। उहाँलाई दिइएको कोठाबाहेक अन्य कोठामा उहाँले पाइला राख्नासाथ हामी भन्ने गर्दथ्यौँ- ‘आमा ! जानुहोस्, आफ्नो कोठामा गएर सुत्नुहोस्।’
‘आमा! तपाईं किन यसरी हामीलाई दुःख दिनुहुन्छ? तपाईंको स्याहार–सुसार गर्नुपरेको हुनाले मैले जागिरसमेत छोड्नुपर्ने भएको छ। काठमाडौंजस्तो ठाउँमा एउटाको कमाइले घर धान्नु र तपाईंलाई औषधोपचार गर्नु कस्तो गाह्रो हुन्छ, त्यो तपाईंले बुझ्न सक्नुहुन्न। भएन, यसरी जति बेला मन लाग्यो त्यति बेला आफूखुसी उठेर हिँडिदिने! अब त साह्रै दिक्क लागिसक्यो,’ प्रायःजसो आमाको अघि आफ्नो मनमा उठेको गुनासो यसरी नै पोख्ने गर्दछिन् मानवी।
‘हेर्नुहोस्, अब मैले जागिर नगर्ने हो भने घर चलाउन र बच्चाहरू पढाउन सकिँदैन। अति भयो। अब कुनै न कुनै उपाय त गर्नै पर्छ,’ मानवीले प्रायःजसो मसँग भन्न थालेकी छिन्। म के गरूँ ? जति-जति आमाको अनौठो र अप्रिय क्रियाकलाप बढ्दै छ, त्यति–त्यति मानवी र मेरो माझमा वैमनस्य बढ्दै छ।
‘हरे ! वृद्धावस्थामा असाध्यै रोगले ग्रसित भएर सुर हराएपछि मानिसको अवस्था कति दीनहीन र कति टिठलाग्दो हुँदो रहेछ। यसरी अर्काको दयाको पात्र भएर जिउनुभन्दा त बरु मृत्यु नै सुखदायी होला,’ आमाको दयनीय अवस्था देख्दा म बारम्बार मनमनै यसरी नै सोच्ने गर्दथेँ। अब मेरो मनले पनि साँच्चै नै हरेस खाएजस्तो भएको छ। अस्ति त हामीले आमालाई कुनै वृद्धाश्रममा राखिदिनुपर्छ कि भनेर घरसल्लाह पनि गरेका थियौँ। तर, हामी छोराबुहारी हुँदाहुँदै पनि आमालाई वृद्धाश्रममा राखिदिँदा समाजले के भन्ला ? जोरीपारी कति हाँस्लान् ? भन्ने लाग्यो।
अर्को कुरो, मेरी आमाको अवस्था देखेर कुनचाहिँ वृद्धाश्रमले उहाँलाई आश्रय देला र?
कहिलेकाहीँ त म निकै पहिले कसैले मलाई सुनाएको एउटा हृदयबिदारक घटना सम्झेर निकै बेरसम्म घोरिने गर्न पनि थालेको छु। त्यो घटना यस प्रकारको थियो- एक दिन करिब सय वर्षकी जस्ती देखिने एउटी कुप्री वृद्धा पशुपति मन्दिरनजिकै बसेर रोइरहेकी थिइन् अरे। ती वृद्धालाई देख्दा उनी निकै सम्पन्न घरकी जस्ती देखिन्थिन् अरे। उनलाई त्यसरी रोएको देखेर वरपर भएका मानिसले कौतूहलतावश उनीसँग सोधपुछ गरेछन्। तर, उनले आफ्नो भाषामा के उत्तर दिइछन् कुन्नि, त्यो कसैले पनि बुझेनछन्। जे होस्, रात पर्न लागेपछि उनलाई वृद्धाश्रममा पुर्‍याइएछ।
आफ्नी जन्मदातृ अशक्त वृद्धा आमालाई त्यसरी बिरानो देशमा अलपत्र पारेर एक्लै छोडेर जानुपर्दा उसको आत्मामा कति चिरा पर्‍यो होला? कति धिक्कार्‍यो होला उसले आफूलाई? कति कल्पन्थ्यो होला ऊ आफ्नो कुकृत्य सम्झेर? आफूले गरेको दुष्कर्मका लागिपश्चात्ताप गर्दै ऊ फेरि त्यस ठाउँमा आएर आफ्नी आमाको खोजी गर्‍यो होला त? यस्तै-यस्तै प्रश्नले मेरो मथिंगललाई झकझक्याइरहन्छन्।
के म आफ्नी आमालाई त्यसरी नै बिरानो देशमा निराश्रय छाडेर आएपछि शान्तिको जीवन बिताउन सकुँला? एउटी अबोध सानी बालिकाजस्तै भइसकेकी मेरी आमालाई म के गरेर पहिलेको जस्तै स्वस्थ अवस्थामा ल्याऊँ? के गरेर उहाँलाई सद्दे पारूँ? हरे …! म के गरूँ …? मेरो हृदयमा यस्तै प्रकारका अनेक थरी कुरा खेल्दछन्। होइन, म कति दिनसम्म यसरी आफ्नी आमाको र मेरा परिवारको दुर्गति सहेर बस्न सकुँला र?
‘आमा ! जानुहोस्, आफ्नो कोठामा गएर बस्नुहोस्,’ मैले भनेको थिएँ।
‘आमा जानुस् न भन्या, … कोठा गन्हाइसक्यो !’ मैले केही आजित भएर ठूलो स्वरमा भनेको थिएँ।